အာနန္ဒာ | ၂၀၁၉-၂၀ ထပ်တိုးဘတ်ဂျက် အစိုးရအဖွဲ့ ဘတ်ဂျက်အဆိုပြုလွှာ အနှစ်ချုပ်
၂၀၁၉-၂၀ ထပ်တိုးဘတ်ဂျက် အစိုးရအဖွဲ့ ဘတ်ဂျက်အဆိုပြုလွှာ အနှစ်ချုပ်
Posted in ဘတ်ဂျက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု on May 14, 2020
မကြာမီ ပြန်လည်စတင်မယ့် လွှတ်တော်မှာ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေကြမ်းကို အဓိကထား ဆွေးနွေးကြမှာပါ။ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေကြမ်းဆိုတာ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဘတ်ဂျက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ ဘဏ္ဍာငွေ လိုအပ်ချက်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါ ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ လွှတ်တော်ကို တင်ပြမယ် ထပ်တိုးဘက်ဂျက်အဆိုပြုလွှာကို သမ္မတဦးဆောင်တဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်က ဧပြီလ ၇ ရက်က အတည်ပြုခဲ့တာပါ။
ထပ်တိုးဘက်ဂျက် တောင်းခံမှုတွေမှာ အဓိကအနေနဲ့ ဝန်ထမ်းလစာ/ချီးမြှင့်ငွေ/ခရီးစရိတ်/ပင်စင်၊ အတိုးပေးငွေ၊ အရင်းပေးဆပ်ရန် ထပ်မံလိုငွေ၊ နိုင်ငံတော်ကို ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်၊ လျှပ်စစ်မီတာခ တိုးမြှင့်မှုကြောင့် ထပ်မံလိုငွေ (နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်)၊ ထပ်မံရရှိမယ့် ပြည်ပ အကူအညီ/ချေးငွေတွေအတွက် သုံးစွဲရမယ့် စရိတ်၊ ဆောင်ရွက်ဆဲ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ မြေယာလျော်ကြေးတွေအတွက် တောင်းခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ (သမ္မတရုံး ၂၀၂၀)
ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ ပြင်ပက ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ နောက်တိုးတောင်းခံမှုဟာ ကျပ်ဘီလီယံပေါင်း ၂၉၉၇.၆၅၆ ရှိပါတယ်။ တင်ပြလာမှုတွေကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးက စိစစ်ပြီးနောက် ကျပ် ၃၃၆.၆၆၉ ဘီလီယံကို စိစစ်လျှော့ချခဲ့ပြီး ၂၆၆၀.၉၈၇ ဘီလီယံ ခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့ တင်ပြပြီး ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်က အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် မူလခန်းမှန်းခြေစာရင်းမှာ ရငွေတွင် ကျပ် ၂၅၁၉၉.၇၆၀ ဘီလီယံ၊ သုံးငွေတွင် ၃၁၉၁၈.၈၉၁ ဘီလီယံ ဖြစ်ပြီး အသားတင်လိုငွေမှာ ၆၇၁၉.၁၃၁ ဘီလီယံ ရှိသည်။
ထပ်တိုးဘက်ဂျက်အတွက် တိုင်းဒေကြီး/ပြည်နယ်တွေရဲ့ တောင်းခံမှုဟာ ကျပ် ၃၉၉.၆၅၈ ဘီလီယံ ရှိပါတယ်။ စီမံ/ဘဏ္ဍာ/စက်မှု ဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်ပြီးနောက် ၉၅.၅၅၄ ဘီလီယံကို ဖြတ်တောက်ကာ ၃၀၄.၁၀၄ ဘီလီယံကို ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြည်ထောင်စုက ပြုပြင်လိုက်တဲ့ ဘတ်ဂျက်အရ လိုငွေအတွက် ထောက်ပံ့ငွေအဖြစ် ကျပ် ၅၉.၅၁၈ ဘီလီယံကို ထပ်မံခွင့်ပြုပေးပြီး ဒီငွေတွေကို ပြည်သူကို တိုက်ရိုက်အကျိုးရှိစေမည့် လုပ်ငန်းနဲ့ လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုတးက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပိုသုံးစွဲကြဖို့ ရည်ရွယ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တင်ပြလာတဲ့ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ တောင်းခံမှုကို ရငွေရရှိမှု၊ အခွန်ဝေစုရရှိမှု၊ မူလခန့်မှန်းခြေ လျာထားမှုတွေအပေါ် အခြေခံပြီး မူလခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းအရ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ ပမာဏအပေါ် ၃ ရာခိုင်နှုန်း အမြင့်ဆုံး ညွှန်းကိန်းထားပြီး စိစစ်လျှော့ချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တွေရဲ့ မူလခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း စုစုပေါင်းဟာ ရငွေ ၁၂၁၀.၇၀၄ ဘီလီယံ၊ အသုံးစရိတ် ၃၃၂၅.၀၉၀ ဘီလီယံနဲ့ လိုငွေ ၂၁၁၄.၃၈၆ ဘီလီယံရှိပြီး ယင်းလိုငွေကို ပြည်ထောင်စုက ထောက်ပံ့ငွေအဖြစ် ခွင့်ပြုပေးထားပြီး ဖြစ်သည်။
ကိုဗစ်-၁၉ တုံ့ပြန်မှုအတွက် အစိုးရက ဧပြီလက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စီးပွားရေးတုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်အရ ဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဘတ်ဂျက်ကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပြီး ကိုဗစ်-၁၉ တုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက် ပြန်လည်ခွဲဝေသုံးစွဲမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလိုလျှော့ချမယ်ဆိုရင်တော့ အများဆုံးလျှော့ချနိုင်မယ့်ပမာဏဟာ ၁၅၂၅.၉၇၁ ဘီလီယံအထိ ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတရုံး၊ ၂၀၂၀။ ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင် (၁/ ၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပ။ [Online] Available at: https://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/news/2020/04/07/id-16383 (Accessed 8 May 2020)
Government of the Republic of Myanmar, 2020. Overcoming as One: Covid-19 Economic Relief Plan. [Online] Available at: https://www.moi.gov.mm/moi:eng/?q=news/28/04/2020/id-21511 (Accessed 14 May 2020)